भीम रावलको आशंका- ललिता निवाससम्बन्धि मुद्दा प्रहरीलाई नै फिर्ता गर्नुको पछि कतै फासफुस गर्ने चाल त छैन ?
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले ललिता निवास प्रकरणको मुद्धा सरकार वकिलले फेरी प्रहरीलाई नै फिर्ता गरेपछी आशंका बढेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै नेता रावलले प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरिसकेर सरकारी वकिललाई बुझाएको बालुवाटार,ललिता निवाससम्बन्धि मुद्दा प्रहरीलाई नै फिर्ता गर्नुको पछि कतै मुद्दा फासफुस गर्ने चाल त छैन ? भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
उनले अनुसन्धान नपुगेको भन्ने सरकार र सरकारी वकिलले के के मा नपुगेको हो, खुलस्त गर्नुपर्ने बताउदै अन्यथा, सरकार अपराधको मतियार ठहरिने दाबि गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्-
प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरिसकेर सरकारी वकिललाई बुझाएको बालुवाटार,ललिता निवाससम्बन्धि मुद्दा प्रहरीलाई नै फिर्ता गर्नुको पछि कतै मुद्दा फासफुस गर्ने चाल त छैन ? अनुसन्धान नपुगेको भन्ने सरकार र सरकारी वकिलले के के मा नपुगेको हो,खुलस्त गर्नुपर्छ।अन्यथा, सरकार अपराधको मतियार ठहरिन्छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण- शोभकान्तको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराएर हडपेको प्रकरणमा मुछिँदै थुनामा रहेका आरोपी शोभकान्त ढकालको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको छ । मुद्दाको पेसी न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा.
ललिता निवास प्रकरण: थप अनुसन्धान गर्दै सिआइवी
काठमाडौँ । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँबाट आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन फिर्ता आएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गाको किर्ते लिखतका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान थालेको छ । सिआइवीले ३०० भन्दा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले ललिता निवास प्रकरणको मुद्धा सरकार वकिलले फेरी प्रहरीलाई नै फिर्ता गरेपछी आशंका बढेको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै नेता रावलले प्रहरीले
ललिता निवास प्रकरण: सिआइवीले बुझायो सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन
काठमाडौँ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सिआइवी० ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको किर्ते लिखतका सम्बन्धमा आफ्नो अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । विगत दुई वर्षदेखिको